SomaliTalk.com » 2011 » June » 14
Home » Archive Maalinta June 14th, 2011
Farmaajo oo ku dhawaaqey in uusan iska Casili doonin Xilka Raiisul Wasaaranimo
Maxaase ka jira in Qaramada Midoobey ay Ibrahim Gambari oo reer Nayjeeriya ah ku Bedeli doonto Mahiga oo ah Wakiilka UN u Qaabilsan arrimaha Soomaaliya … Farmajo oo si toos ah uga hor yimid Go’aankii kampala, isagoo caddeeyey in aanu xilka uga tegeyn heshiiskii Kampala, oo shacabka dareenkiisa tixgelinayo … Marka heshiis la soo galo, sidii la doono halagu soo galee, waa in loo...
Xafalad qalin jabin heersare ah oo ka dhacday magaalada Wuhan ee dalka shiinaha
Xafalad qalin jabinta dufcadii ugu horeysay arday soomaali ah oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa heenimadii axada oo ay taariikhdu ku beegneyd 12 june 2011 ka dhacday magaalada Wuhan ee caasimada gobolka Hubei ee bartamaha dalweynaha shiinaha. Xafaldan qalin jabinta oo ay soo agaasimeen ururka ardayda soomalida ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaan WSSU(Wuhan Somali Students Union) ayaa waxaa ay...
Halkudheg: arday, china, wuhan
Habmalyo: Arooska Naasir Xaamud Cabdullaahi iyo Nasra Maxmuud Yusuf oo ka dhacay Magaaalada Munich ee Wadanka Jarmalka.
Hambalyo Naasir Xaamud Cabdullaahi iyo Nasra Maxmuud Yusuf oo arooskoodii ka dhacay Magaalada Munich ee dalka Jarmalka ,Taariikhdu markay ahayd 11/06/2011. Waxaana Allah oga baryaynaa in uu ka dhigo qoyskii isku liibaana, oo Allah dhexdooda dhex dhiga khayr farabadan Amiin. Waxaana hambalyadani u diraya dadka magacyadooda hoos ku qoran: Bootaan Barre Samantar iyo qoyskiisa (Denmark) Cabdiraxmaan...
Rooxaanland – II – Qaybta 2aad
Arrinta labaad haddaan u leexdo. Waa arrin runtii aan ku dheeraan doonoo, maadaama loo baahan yahay in si fiican loo fahmo. FG: Qaybtii 1aad ka eeg halkan… waxaa jirta in 40kii sano ee ugu dambaysay ay dalka soo galeen dariiqooyin ay ka mid yihiin Ikhwaan al Muslimiin iyo tayaarka Shiikh Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Suleiman (Allaha u naxariistee) ee ‘Wahabiyada’ loo yiqiin – haddana loo...